Gabar 14 jir ah oo meydkeeda laga helay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Gabar yar oo 14 sano jir ah muddo labbo maalmood ahna qoyskeeda ka maqnayd ayaa la helay iyadoo mayd ah waxaana ka muuqday in jir-dil iyo kufsi loo geystay, gabadha kahor inta aan la dilin dariiqana lasoo dhigi meydkeeda.
Mid kamida ehellada gabadha yar ayaa sheegay in falkan ay geysteen ku dhowaad 20 nin lana soo qabtay 8 kamid ah, iyadoo falkan arxan darrada ahna uu sababay wel-wel iyo cabsi badan oo soo wajahday qoysaska kale ee ku sugnaa xaafadda uu falkan ka dhacay ee magaalada Muqdisho.
Falalka nuucan oo kale ah ayaa inta badan lagu arkaa gudaha Soomaaliya, guud ahaan gobollada dalka ayey mar waliba ka dhacaan tacaddiyo nuucan oo kale ah, waxaana dumarka loo geystaa kufsi wadareed, qaarkood waxaa la dhaafiyaa nolosha si kuwa falkan geystay raadkooda aan loo ogaan!
Dowladda Soomaaliya malahan ciidamo Boolis oo khibraddooda daba-galka aad u sarreeyo, inta badan waxay ciidamadu ku uruursan yihiin saldhigyada degmooyinka, waxayna ka baqanayaan kooxaha ugaarsada ciidamda dowladda, shaqaalaha rayidka iyo mas'uuliyiinta sar-sare ee dowladda ee Al-Shabaab. Sidaasi daraadeed ma jiraan ciidamo heegan ah oo waddooyinka iyo goobaha inta badan shilalku ka dhacaan taagan ama loogu hagaago.
Waalidiinta qaar iyagana ma haystaan wacyi gelin ku filan, markii ay dhibaato sidan oo kale ah dhacdana lama xiriiraan saldhigyada booliska si baaritaan loogu sameeyo.
Waalidiinta dhalay gabadha yar ayaa codsanaya in gabadhooda ay hesho caddaalad, raggii falkan geystayna lasoo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan.